Ejipta : Fanondranana Ny Taovan’Ireo Mpifindra Monina Ao Sinai · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2011 3:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, عربي, English
Ny Vondrona Iraisam-pirenena Miaro ny Zon'olombelona, ao anatin'izay ny ao Isiraely, dia nanao fanambarana hentitra fa ireo mpifindra monina Afrikana dia tazonina mba hakàna vola, ampijaliana, ary iharan'ny fanondranana ihany koa. Ireo mpitsabo mpanao fikarohana Isiraeliana miro ny Zon'olombelona, ohatra, dia nanambara fa “Mpifindra monina an-jatony no mbola voatazona ao Sinai” ary iharan'ny “fanararaotana ara-batana, fampijaliana, fanolanana ary fahafatesana mihitsy aza, izany rehetra izany no atao mba ahazoana dolara an-tapitrisany maro ho takalon'ny fanavotana azy ireo.”
Ary ny tena mampanahy indrindra, amin'izany, dia ny fanadihadiana navoakan'ny CNN izay milaza fa ny famarotana taovan'olombelona dia miroborobo ihany koa. Nambaran'ilay mpitarika foko iray tamin'ilay fanadihadiana fa “ny varotra taova dia asa faharoa mampidi-bola indrindra aorian'ny varotra fitaovam-piadiana”. Mampidi-bola be kokoa noho ny fanondranana rongony sy ny fivarotan-tena.”
[FAMPITANDREMANA : Lahatsary mampihoron-koditra ]
israel matzav dia naneho ny heviny tamin'ilay vaovao.
Misy ny fangalarana taova eto amin'ny faritanintsika ary efa manenika ny sisintany isiraeliana sy ejipsiana izany. Ary efa fantatrareo izany, sa tsy izany? Oh andraso – tsy fantatrareo satria nihaino an'i Carl Bildt sy Donald Bostrom ianareo ary noheverinareo fa ny “Jooos” no mangalatra ireo taova. Saingy tsy izany. Fa ireo mponina Bedouin Arabo any amin'ny saikanosy avaratr'i Sinai no manao izany. Ary mangalatra ny taovan'ireo mpifindra monina Afrikana izy ireo.
Toy ny ataon'ny The Jewish Daily Forward.
Ny Bedouin Ejipsiana mpanao trafika dia voalaza fa mamono ireo mpifindra monina Afrikana izay manandrana ny hiditra ao Isiraely noho ny taovany. Ny marimarina kokoa, ny Bedouinsdia manome rongony ireo mpifindra monina izay tsy afaka mandoa ny saran-dalàny izay avo vidy, mamoha azy ireo, mandray ny taovan'izy ireo, ary mamela azy ireo ho faty ao Sinai.
Ny Jerusalem Post dia niainga tamin'ny fanadihadihan'ny CNN nanambara loharanom-baovao izay nilaza fa ireo klinika mifindrafindra miaraka amin'ny fitaovana harifomba dia avy amin'ny hopitaly tsy miankina ao Kairo ary nanao fizaham-pahasalamana tamin'ireo mpifindra monina mba ahafahan'izy ireo mijery ny taova salama. Avy eo ny fandidiana dia atao eo an-toerana any afovoan'ny tany hay. Ireo dokotera dia mandoa 20 000 $ mihoatra isaky ny taova amin'ny foko Sawarka.
Jerusalem Diaries : Ny Tense Times no iray amin'ireo bilaogy maro nanely izay nolazainy fa taratasy avy aminà rezervista Israelitat miasa amin'ny sisintany miaraka amin'ny Ejipta.
Taona maro lasa izay, nanomboka nalaza ny Mpifindra Monina izay namakivaky ny sisintanin'ny Ejipta an'i Sinai any Isiraely mba hitaky ny fanaovana sesitany noho ny zava-doza mitranga ao Darfour. Ilay nanomboka taminà lehilahy vitsy, vehivavy ary ankizy izay nitsoaka ny Janjaweed sy ny herisetra ara-poto-kevitra mba hikatsahana fianana tsaratsara kokoa, dia niova ho orinasa natao anaovana fanondranana taova. Ho takalonà vola be, ary indraindray fitsinjovana ny fiainana iray manontolo no aloan'ny Bedouin ireo mpialoha lalàna, ireo mpifindra monina ireo dia nomena toky fa ho entina avy ao Soudan, Erythrée, ary firenena Afrikana hafa makany Ejipta sy ny tany hay ao Sinai, ka hatrany amin'ny tany azo antoka any Isiraely.
Maheno tantara mahatsiravina hatrany hatrany izahay mikasika ireo mpifindra monina ireo eny amin'ny lalàn'izy ireo mankany amin'ny fahafahana. Voageja, ary iharan'ny fampitahorana, fanolanana, famonoana, ary hatramin'ny fangalarana taova aza izy ireo, ary ny vatan'izy ireo dia avela ho lo any an-tany hay any. Avy eo, raha manam-bitana, aorian'ny fiainana izany rehetra izany dia fahafahana no valisoa, raha toa ka fefy tariby no mampisaraka azy ireo amin'Isiraely sy ny tanjony, mila mandalo amin'ny fahafatesana farany amin'ny fihazakazahana izy ireo ary manao izay hitsoahana ny balan'ireo miaramila Ejipsiana izay mijanona eny amin'ny sisintany. Ireo miaramila Ejipsiana dia natao hitifitra ireo olona rehetra izay manao izay hamakivakiana ilay sisintanin'i Ejipta sy Isiraely. Zava-mitranga mila ho isan'alina izany.
Rebel With A Cause, bilaogy Ejiptiana iray dia taitra ihany koa.
Ny Vondrona Iraisam-pirenena Miaro ny Zon'olombelona ejipsiana dia nanao fanambarana hentitra momba ireo fampijaliana, fanolanana ary fanondranana ny taovan'ireo mpifindra Monina tao Sinai teo aloha, kanefa ireo manam-pahefana dia tsy te hiaiky izany na handray andraikitra. Mbola mitohy ihany izany ary ny governemantantsika dia tsy te hanelanelana mba hampiato io loza mitatao io.
Indrisy anefa, manana tantara ratsy isika momba ilay resaka fifindra-monina ao Ejipta. Ireo mpifindra monina dia mitsoaka ny ady any amin'ny fireneny, fifanarahana na fahasarotana ara-ekonomika mba hiatrehana ny fahasahiranana ao Ejipta. […]
Tsy afaka ny hitohy intsony io toe-javatra io. Ilaina ny Fandraisana fanapaha-kevitra haingana avy amin'ny governemanta mba hampiatoana izany fanosihosena izany. Tena mahatsiravina, raha ireo lehilahy, vehivavy ary ankizy izay niala tany amin'ny fireneny mba hanavotr'aina no tojo olana ohatra izany ihany, ary ratsiratsy kokoa aza. Tokony ho jerena akaiky ny momba ireo mpifindra monina sy ny momba azy mba hamaranana ny fijalian'izy ireo.
Hetsi-panoherana teo anoloan'ny Ambasadin'ny Etazonia manohitra ny fanondranana antsokosoko ny mpifindra monina"Eritrean" izay vonoina rehefa mamakivaky an'i Sinai. Sary avy amin'i Carlo Van As © Demotix (25/11/2011)
Fanangonan-tsonia ho fampijanonana ny Fanondranana ny Taovan'ireo Mpifindra monina ao Ejipta dia anaty aterineto ato.